သုတ ရသ နည်းပညာ - မှတ်စု: April 2015
သုတ ရသ နည်းပညာ - မှတ်စု
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ကျွန်တော့်ရဲ့ဘလော့လေးသို့လာရောက်လည်ပတ်ပေးကြသောဦးဦး၊ဒေါ်ဒေါ်၊ကိုကို၊မမ၊ညီ၊ညီမအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ လာရောက်ဖတ်ရှု့ပေးသည့်အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ
Clash Of Clans V7.65 ( For Android )
Clash Of Clans သမားတွေအတွက်ဒီနေ့ update တက်လာတဲ့ version 7.65 လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်
လိုအပ်သူများ play store ကနေဒေါင်းယူရန်အခက်အခဲရှိပါကအောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်နိုင်ပါတယ်
Posted by A Yan Lu at 4:44 AM No comments:
Labels: GAMES, Mobile Softwares
Windows System ထဲမှာ Viruses ဝင်သွားပြီဆိုရင် တော်ရုံ Antivirus ဆော့ဝဲများနဲ့ သတ်လို့မရနိုင်ပါ။ အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ Kaspersky Rescue Disk ISO ဖိုင်ကို Bootable Image အဖြစ် Burn ပြီး Autorun စနစ် ဖြင့် run ပြီး ရှင်းလင်းမှသာရနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လိုအပ်နေသူများအသုံး ပြုနိုင်ရန် Kaspersky Rescue Disk နောက်ဆုံးထွက် Versionကိုတင်ပေး လိုက်ပါတယ်။
Zip Password = ayanlu
Boot from the Kaspersky Rescue Disk to scan and remove threats from an infected PC without the risk of infecting other files or computers. Burn this ISO image toaCD, insert it into the infected system’s CD-ROM drive, enter the PC’s BIOS, set it to boot from the CD and reboot the PC. Kaspersky Rescue Disk 10 allows performing the following actions:
*change security level *change actions to be performed on detected objects *createascan scope *change types of objects to be scanned *limit scan time *configure scan of compound files *changeascan method *set default settings • Configure databases update settings: *select an update source *specify proxy-server settings *specify regional settings *roll back to previous databases • Configure additional settings: *select detection of specific threat types *createatrusted zone *configure notifications settings *specify time of storing reports *specify time of storing Quarantine and Backup objects • Createareport on scan and update tasks. • View statistics about applican’s functioning. Hardware Requirements • 480 MB available hard drive space • CD/DVD-ROM • Internet connection • Computer mouse • Internet Explorer 8.0 and higher • Windows Installer 3.0 and higher System Requirements • Microsoft Windows XP Home Edition SP2 • Microsoft Windows XP Professional SP2 (32/64 bit) - Intel Pentium 300 MHz or above - 256 MB available RAM • Microsoft Windows Vista Home Basic (32/64 bit) • Microsoft Windows Vista Home Premium (32/64 bit) • Microsoft Windows Vista Business (32/64 bit) • Microsoft Windows Vista Enterprise (32/64 bit) • Microsoft Windows Vista Ultimate (32/64 bit) - Intel Pentium 800 MHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) or above - 512 MB (32-bit) available RAM • Microsoft Windows7Starter (32/64 bit) • Microsoft Windows7Home Basic (32/64 bit) • Microsoft Windows7Home Premium (32/64 bit) • Microsoft Windows7Professional (32/64 bit) • Microsoft Windows7Ultimate (32/64 bit) - Intel Pentium 800 MHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) or above - 1 GB (32 bit) /2GB (64 bit) available RAM • Microsoft Windows 8 (32/64 bit) - Intel Pentium 1 GHz 32-bit (x86) / 64-bit (x64) or above - 1 GB (32 bit) /2GB (64 bit) available RAM • Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 (32-bit) • Microsoft Windows Server 2003 R2 SP1 (64-bit) • Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit) • Microsoft Windows Server 2012 (64-bit)
Posted by A Yan Lu at 5:27 AM2comments:
I MOBILE FIRMWARE များစုစည်းမှု
ROM : i-mobile i-style 2.1 https://drive.google.com/file/d/0B0Ayx0vkowzMUEsteTZNMWpGT3M/view?usp=sharing ROM : i-mobile i-style 2.2 ...
Bagan Keyboard 5.9 Full Version (Cracked)
ပုဂံကီးဘုတ်ချစ်သူတွေအတွက် ကို Orange Cracker Cracked ပေးထားတဲ့ Bagan Keyboard 5.9 Full Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်ရင်တော့အေ...
Huawei Phone တွေကိုိ Bootloader unlock လုပ်နည်း ========================================= Huawei Phone တွေ Unlock code တောင်းကြမယ်။ C8812,C8...
Huawei Honor Holly Hol-U19 Version 4.4.2 Offical Firmware တင်နည်း
Huawei Honor Holly Hol-U19 Version 4.4.2 အတွက် Build Number 106 နဲ့ Offical Firmware ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်ရင်အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက...
Huawei Honor Holly Hol-U19 Version 4.4.2 ကိုမြန်​မာစာမှန်​​အောင်​နှင့်​ယပင့်​မကပ်​​အောင်​ မြန်​မာ​ဖောင့်​ထည့်​နည်း
ဒီ​နေ့ကျွန်​​တော်​တင်​​ပေးသွားမှာက​တော့ Huawei က​နေသိပ်​မကြာ​သေးခင်​ကမှ ​ဈေးကွက်​ထဲစတင်​​ရောက်​လာပြီး ​ဈေးနှုန်းလည်းအသင့်​အတင့်​ရှ...
SP Flash Tool 5.1 MTK ဖုန်းအများစုကို firmware တင်နည်း
အခုတင်ပေးမှာကတော့ SP Flash Tool ရဲ့နောက်ထွက် verison ဖြစ်တဲ့ 5.1 နဲ့ Firmware တင်နည်းဖြစ်ပါတယ် တင်ပုံတင်နည်းကတော့ အရင် version အတိုင်းပါဘဲ...
OPPO R1001 OFFICAL FIRMWARE
OPPO R1001 အတွက်မြန်မာစာပါပြီးသား offical firmware ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် လိုအပ်ရင်အောက်မှာဒေါင်းယူလိုက်ပါ DOWNLOAD ယူရန်ပုံကိုကလစ်ပါ ...
GALAXY ACE3GT-S7270 OFFICAL FIRMWARE တင်နည်း
GALAXY ACE3GT-S7270 ကို OFFICAL FIRMWARE တင်ဖို့အတွက် computer ဖြင့်လုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်လို့ မိမိရဲ့ computer မှာ Samsung Usb Driver ကို...
GALAXY ACE4SM-G313M ROOT ဖောက်နည်း
GALAXY ACE4SM-G313M ROOT ဖောက်နည်းကိုတော်တော်များများတော့တင်ပေးပြီးကြပါပြီ မသိသေးလို့လာမေးထားတဲ့သူငယ်ချင်းအတွက်တင်ပေးရင်း အခြားမသိသ...
GALAXY WIN DUOS GT-I8552 VERSION 4.1.2 OFFICAL FIRMWARE THL
GALAXY WIN DUOS GT-I8552 Version 4.1.2 အတွက်မြန်မာစာပါပြီးသား offical firmware Thai region ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ် resume ရအောင်လို့ Me...
A Yan Lu
Total Posts & Total Comments
ဧရာဝတီသား - နည်းပညာမှတ်စု